Umahluko phakathi kwe-SEO kunye ne-SEM, iiNdlela eziBini zokuFumana ukugcwala kwiWebhusayithi yakho | Martech Zone
Ngaba uyawazi umahluko phakathi kwe-SEO (ukuSebenzisa iiNjini zoKhangelo) kunye ne-SEM (ukuThengisa iiNjini zoKhangelo)? Ngamacala amabini engqekembe enye. Zombini ezi ndlela zisetyenziselwa ukubamba ukugcwala kwiwebhusayithi. Kodwa enye yazo ikhawuleze ngakumbi, kwixesha elifutshane. Kwaye enye yotyalo-mali lwexesha elide.
Ngaba sele uqikelele ukuba yeyiphi eyona ilungileyo kuwe? Ewe, ukuba awazi, apha siyakucacisa. I-SEO ijongene neziphumo zendalo; abo bahlala kwizikhundla eziphezulu zeziphumo zophando lukaGoogle. Kwaye i-SEM zezi ziphumo kwasekuqaleni ezahlelwa njengentengiso.
Ngokubanzi, iintengiso zenziwa zisebenze xa ukukhangela kuthetha ukuthenga ngabom, okanye ukukhangela ulwazi malunga nemveliso. Kwaye zahlukile kwiziphumo ze-organic kuba zichongwe ngelebheli encinci ethi: "Intengiso" okanye "Ixhaswe." Lo ngumahluko wokuqala phakathi kwe-SEO kunye ne-SEM yindlela iziphumo ezibonakala ngayo kukhangelo.
I-SEO: Isicwangciso sexesha elide
Ukuma kwe-SEO ngabo bonke obu buchule busetyenziselwa ukubeka iphepha kwi-organic organic uphendlo lukaGoogle. Ungazinanzi zonke ezo zithembiso zikuxelela ukuba i-SEO ilula kakhulu kwaye nezinto ezinjalo. Ke ngoko, omnye umahluko omkhulu phakathi kwe-SEO kunye ne-SEM lixesha layo lokufumana iziphumo.
I-SEO yindlela yexesha elide. Ukubeka iziphumo kwiphepha lokuqala likaGoogle kuxhomekeke kwizinto ezininzi (amakhulu ezinto ezinokubakho).
Isitshixo ekuqaleni kukusebenzisa ubuchule obubizwa ngokuba "ngumsila omde." Sebenzisa amagama aphambili awandisiweyo, ukhangelo oluncinci kodwa ukhuphiswano oluncinci.
I-SEM: Ixesha elifutshane kunye nokugcinwa
I-SEM isetyenziselwa ikakhulu izizathu ezibini:
Ukuthimba utyelelo kwiwebhusayithi kwasekuqaleni kweprojekthi, xa singekaveli kwizikhundla eziphilayo.
Ukuwasebenzisa onke amathuba, kuba ukuba asiyisebenzisi, ukhuphiswano luya kuyenza.
Iziphumo eziza kuboniswa nguGoogle "ngesihlangu sezemidlalo" ziya kwahluka ku "Nike isihlangu sesibini ku-LA" Kuya kubakho abambalwa abafuna le yokugqibela, kodwa injongo yabo icace ngakumbi.
Yiyo loo nto obu buchule bokushicilela iintengiso kwiinjini yokukhangela, ikakhulu intengiso yeAdwords, isetyenziswa kokubini kwixesha elifutshane ukuqala ukwamkela abasebenzisi abatyelela iwebhu, kunye nexesha elide ukuqhubeka nokugcina isabelo sentengiso kweli candelo lentengiso.
Kukho ukukhangela apho kunzima kakhulu ukuvela kwiphepha lokuqala leziphumo. Khawufane ucinge ukuba uthengisa izihlangu zemidlalo. Ukuvela kwiphepha lokuqala lokukhangela "thenga iiteki" iya kuba ngumdyarho wokwenene kwixesha elide. Oko kukuthi ukuba uya kuze ufike apho.
Awungekhe ukhuphisane kwaye ungaphantsi kokuchasene nezigebenga zokwenyani ezinje ngeAmazon. Akukho nto, khawufane ucinge ukuba kunjani ukulwa nezigebenga. Ewe inkcitho yexesha kunye nezixhobo.
Kungenxa yoko le nto iintengiso ukuba zenziwe zacaca gca, zisinika ithuba lokukhuphisana nala magorha kwaye sinethuba lokuvela kukhangelo olunokuthi lube yinto engenakwenzeka.
Umahluko phakathi kwe-SEO kunye ne-SEM
Masibone awona mahluko ubalulekileyo phakathi kwendlela enye nenye.
Imihla yokugqibela - Kuyatshiwo ukuba i-SEM lifutshane, kwaye i-SEO lixesha elide. Nangona, njengoko sele ubonile, kukho amacandelo apho i-SEM inyanzelekile ukuba awufuni kuphulukana naliphi na ithuba lokutsala abathengi. Ukusukela ngalo mzuzu siqwalasele amaphulo ethu kwaye "sinika iqhosha," siza kuqala ukuvela kukhangelo lwamakhulu okanye amawaka abasebenzisi (kulungile, imali esele ixhomekeke kuhlahlo-lwabiwo mali). Nangona kunjalo, ukuvela kwiziphumo zendalo, kunyanzelekile ukuba usebenze iinyanga ezininzi, okanye neminyaka, ukufumana izikhundla kancinci kancinci. Ngapha koko, xa iwebhusayithi intsha, kuthiwa kukho ixesha apho iGoogle isakuthatha ngokungathí sina, esihlala malunga neenyanga ezintandathu. Kwaye nokuba ungakanani umsebenzi owenze okhethekileyo, kuyakubiza ukuba uvele kumaphepha okuqala enjini yokukhangela iinyanga ezimbalwa. Yinto eyaziwa ngokuba yi "Sandbox" kaGoogle.
Ixabiso - Iindleko ngomnye umahluko phakathi kwe-SEO kunye ne-SEM. I-SEM ihlawulwe. Sithatha isigqibo sohlahlo-lwabiwo mali, kwaye sihlawuliswa ngalo lonke ucofa olwenziwe kwiintengiso zethu. Kungenxa yoko le mikhankaso ikwabizwa ngokuba yi-PPC (hlawula ngokucofa nganye). I-SEO isimahla; awunyanzelekanga ukuba uhlawule nabani na ukuze avele kwiziphumo. Nangona kunjalo, indleko ngexesha kunye neeyure ezisetyenzisiweyo zihlala ziphezulu kunakwimeko ye-SEM. Izikhundla ze-organic kwiinjini zokukhangela azifanelanga ukuba zenziwe ngobuqhetseba. Kukho amakhulu eekhrayitheriya kunye neeparameter ekufuneka zithathelwe ingqalelo kwiphepha eliza kuvela ngaphambi okanye emva kwabanye. Eminye imigaqo yomdlalo ekufuneka uyazi, kwaye kufuneka ulumke ungazami ukutshintsha ukuze ungafumani izohlwayo. Ezokuqala ziindlela zokwenza ii-algorithms (ngamanye amaxesha zinokuziphatha gwenxa), kwaye okwesibini kukusebenzela ukuphakama kwizikhundla, kodwa ngaphakathi kwemigaqo yomdlalo.
Izithuba kwinjini yokukhangela - Kwi-SEM, ukongeza kukuhlala kwizikhundla zokuqala zeziphumo, unokubonisa iintengiso ekupheleni kwephepha: I-SEM ihlala ihlala ekuqaleni nasekupheleni kwephepha, kwaye i-SEO ihlala ihlala kwindawo ephambili yokukhangela. iziphumo.
Amagama aphambili - Zombini ezi ndlela zisekwe ekusebenziseni amagama aphambili kodwa zinomahluko ophambili ekugxilwe kuwo xa sisenza isicwangciso esinye okanye esinye. Nangona zikho izixhobo ezahlukeneyo ze-SEO kunye ne-SEM, umcwangcisi wegama eliphambili kuGoogle uhlala esetyenziswa kuzo zombini ukuqala ukwenza isicwangciso. Xa sikhangela amagama aphambili, isixhobo sibuyisela onke amagama ahambelana nomxholo okhethiweyo, kunye nomthamo wophendlo lwenyanga nganye, kunye nobunzima kwigama ngalinye eliphambili okanye inqanaba lobuchule.
Kwaye kulapho umahluko omkhulu phakathi kwe-SEO kunye ne-SEM ulele:
Ngelixa sikwi-SEM, siyalahla la magama anegama elincinci lokukhangela, i-SEO inokuba yinto enomdla kakhulu kuba ukhuphiswano lusezantsi kwaye luya kukhawulezisa inkqubo yokubeka ngendlela eyiyo. Kwakhona, kwi-SEM, sikwajonga indleko ngokuchofoza kwigama ngalinye (kuyabonisa, kodwa kusinika umbono wokhuphiswano olukhoyo phakathi kwabathengisi), nakwi-SEO sijonga ezinye iiparameter ezinje ngegunya lephepha .
tags: uphando lwezinto eziphilayoukukhangela okuhlawulelweyoyokukhangela injinienjini yokukhangela nounUphando lwezoPhandosemsem vs seoSEOseo vs sem
UKenneth Evans yiQhinga lokuThengisa uMxholo Iinkampani eziPhezulu zoPhuhliso lweeApp, iqonga lophando lweenkampani zophuhliso lweapps e-USA, UK, India, UAE, Australia, Australia nakwihlabathi liphela. Ebenegalelo kumaqonga ahlukeneyo okubloga nakwiiForam.